(src)="1.1"> Südasien : Blogger diskutieren Wasserfragen
(trg)="1.1"> တောင်​ အာ ​ ရှ ၊
(src)="1.2"> Blog Action Day ist eine Veranstaltung , die jedes Jahr am 15. Oktober die Blogger weltweit zusammenbringt , um am selben Tag über das gleiche Thema zu berichten .
(trg)="1.2"> ရေ ​ ကိစ္စ ​ နှင့် ပတ်သက်​ ၍ ဘ ​ လော့ဂ်​ ရေး ​ သူ ​ များ ဆွေးနွေး ​ ချက ်
(src)="1.3"> Das Aktions-Thema in diesem Jahr ist das " Wasser " .
(trg)="2.2"> ယခု ​ နှစ်လှုပ်ရှား ​ ရန်အကြောင်းအရာ ​ မှာ “ ရေ ” ဖြစ်​ သည်။
(src)="1.4"> Eine Anzahl südasiatischer Blogger haben ebenfalls an dieser Aktion teilgenommen .
(trg)="2.3"> တောင်​ အာ ​ ရှ ​ မှ ဘ ​ လော့ဂ်​ ရေး ​ သူ များ ​ စွာ ​ သည်​ လည်း ဤ ​ အစီ ​ စဉ်​ တွင်ပါဝင်​ ခဲ့​ ကြ ​ သည်။
(src)="1.5"> Wir wollen einmal sehen , über was einige von Ihnen diskutiert haben .
(trg)="3.2"> မာ ​ မယ်​ လ ​ ပူ ​ ရမ်​ တွင်ရေ ​ ဖြည့် ​ ရန်အိုး ​ များ တန်း ​ စီ ​ ထား ​ သည်​ ကို တွေ့​ ရ ​ စဉ်။
(src)="2.2"> Bild von Flickr Nutzer mckaysavage .
(trg)="3.3"> ဖ ​ လစ်​ ကာ ​ အသုံးပြု ​ သူ mckaysavage ၏ ဓာတ်​ ပုံ ။
(src)="3.5"> Nordwest-Indien ist eine verdurstende Wüste .
(trg)="5.3"> မြောက်​ အိန္ဒိယ ​ က ရေ ​ ကို မွေး ​ ထုတ်ပေး ​ သည်။
(src)="4.2"> Wir haben unsere althergebrachte Lebensweise vergessen , wo jede natürliche Ressource , wie Wasser , gebraucht und nicht missbraucht wurde .
(trg)="5.5"> အနောက်မြောက်​ အိန္ဒိယ ​ မှာ ​ မူ ရေ ​ ပြတ်လပ်​ နေ ​ သော သဲ ​ ကန္တာ ​ ရ ​ ဖြစ်​ နေ ​ သည်။
(src)="4.3"> Es gab keine endlosen Duschen , Whirlpools , Regen-Parties oder riesige Wassertanks , um sicherzustellen , dass Wasser bei allen Waschungen vorhanden war .
(src)="4.4"> Das Wasser wurde nach Gebrauch rationiert .
(src)="4.5"> Es gab keine 24/7Wasser Konzepte und jeder Haushalt musste sein eigenes Stückchen Land bestellen .
(trg)="5.6"> ထို့​ အပြင်အရှေ့​ ပိုင်း အိန္ဒိယ ​ က ​ မူ မည်သို့​ မျှ အကူအညီ ​ မ ​ ပေး ​ နိုင်​ သော အမြင့် ​ ဆုံး မိုး ​ ရေ ​ ချိန်​ ကို ပိုင်ဆိုင်​ နေ ​ ပြန်​ သည်။
(src)="4.6"> Wir , mit unserem Wissen , Erkenntnissen und Verantwortung , verwandeln die Erde unaufhörlich zu einer Hölle. .
(trg)="6.1"> ၎ င်း အချက်​ များ ​ အပြင်အိန္ဒိယ ​ ရှိ ရေ ​ ဒုက္ခ ​ များ ​ တွင်သန့် ရှင်း ​ သော ​ ရေ ​ မ ​ ရ ​ ခြင်း ၊
(src)="5.1"> Abha Midha informiert :
(trg)="6.6"> သုံးစွဲ ​ ခြင်း ၊
(src)="5.3"> Von Dr. Bindeshwar Pathak eingeführt , sind die Sulabh Toiletten eine kostengünstige und umweltfreundliche Lösung für die Menschen geworden
(trg)="7.2"> ထို ​ အချိန်​ က အဆုံး ​ မ ​ ရှိ ​ နိုင်​ သော ရေချိုး ​ ခန်း ​ မှ ရေပန်း ​ များ ၊
(src)="5.4"> Wasserverteilungsstelle in Patan Nepal .
(trg)="7.3"> ရေနွေး ​ ရေချိုး ​ ကန်​ များ ၊
(src)="5.5"> Bild von Flickr Nutzer Wayan Vota .
(src)="5.6"> CC BY-NC
(trg)="7.4"> မိုး ​ ရေ ​ အောက်​ မှ ပျော်ပွဲ ​ ရွှင်​ ပွဲ ​ များ ၊
(src)="5.7"> Nepal :
(trg)="7.6"> ရေ ​ ကို သုံးစွဲ ​ မှု ​ အလိုက်အချိုး ​ ချခဲ့​ ကြ ​ သည်။
(src)="5.8"> Bhumika Ghimire erläutert die Wasserproblematik in Nepal :
(trg)="7.8"> ကျွန်တော်​ တို့​ သည်ဗ ​ ဟု ​ သုတ ၊
(src)="5.10"> In der Hauptstadt gibt es viele Stadteile , die sechs Tage in der Woche kein Wasser erhalten .
(trg)="7.9"> အသိ ​ တရား ​ နှင့် တာဝန်​ ကျေ ​ မှု ​ တို့​ ကို သုံး ​ ၍ ကမ္ဘာ ​ မြေကြီး ​ အား လောက ​ ငရဲ ​ အဖြစ်​ သို့ပြောင်း ​ ပစ်​ နေ ​ ကြ ​ ခြင်း ​ သာ ဖြစ်​ သည်။
(src)="5.11"> Man ist gezwungen Wasser entweder von Händlern zu kaufen oder sich auf lokale Brunnen und Bäche zu verlassen , deren Wasser-Qualität nicht überwacht wird .
(trg)="9.3"> အိန္ဒိယတွင်ဆူလဘ်လှုပ်ရှား ​ မှု သည်လူ ​ မှု ​ လုပ်​ ငန်း တော်​ လှန်​ ရေး ​ ကို ယူဆောင်​ လာ ​ ပေး ​ သည်။
(src)="5.12"> Ujjwal Acharya veröffentlicht ein Bild das zeigt , welche Rolle das Wasser in unserem täglichen Leben spielt .
(trg)="9.5"> နီ ​ ပေါ ​ နိုင်ငံ ​ ရှိ ရေ ​ ဖြန့် ​ ဝေ ​ ရာ ​ ဌာန ။
(src)="5.13"> Pakistan :
(src)="5.14"> Obgleich Pakistan die schlimmsten Überschwemmungen im vergangenen Jahrhundert erlebt , sind einige Regionen trocken und leiden unter Wüstenbildung .
(trg)="10.1"> ဘုမိက ဂီ ​ မိုင်း ​ ယား ​ က နီ ​ ပေါ ​ နိုင်ငံ ​ ၏ ရေ ​ အကြောင်း ​ ကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်မှာ ၊
(src)="6.2"> Baluschistans traditionelle Formen der Existenzsicherung und Nutzung der landwirtschaftlichen Länder haben sich allmählich verändert .
(trg)="11.1"> ရေ အကျပ်အတည်း ​ သည်နီ ​ ပေါ ​ ၏ ပတ်ဝန်းကျင်​ ညစ်ညမ်း ​ မှု ​ နှင့် တိုက်ရိုက်​ သက်ဆိုင်​ နေ ​ ပါ ​ သည်။
(src)="6.4"> Die Bergwelt ist heute zu einer neuen Katastrophen Gefahr geworden .
(trg)="16.1"> ဆင်းဒ်​ ရှိ သာ ​ ပါ ​ ကာ သဲ ​ ကန္တာ ​ ရ မာ ​ လီ ​ ယာ ​ ရွာ ​ ၏ ရေတွင်း ။
(src)="6.6"> Bild von Flickr Nutzer Kashif .
(trg)="16.2"> Flickr အသုံးပြု ​ သူ Kashif ၏ ဓာတ်​ ပုံ ။
(src)="6.7"> CC BY
(src)="7.4"> Selbst wenn man erfolgreich ist , dann ist das Wasser so brackig und salzig , dass es zum Trinken ungeeignet ist .
(trg)="18.1"> မိုးရွာ ပြီ ​ ဆို ​ လျှင်“ တို ​ ဘ ” ဟုခေါ်​ သော လူ ​ နှင့် ​ တိရစ္ဆာန်​ များ ရေ ​ အတူတူ ​ သောက်​ ကြ ​ သည့် ပန်းကန်လုံး ​ ပုံ ​ သဏ္ဌာန်ရေတွင်း ​ ငယ်​ များ ​ ထဲ ​ သို့စီး ​ ဝင်​ သည်။
(src)="1.1"> Erklärung der Internetfreiheit
(src)="1.2"> Wie schon viele beobachtet haben , ist die Welt in Bezug auf das Thema Internetfreiheit an einem kritischen Punkt angelangt .
(src)="1.3"> In vielen Ländern auf der ganzen Welt werden neue Gesetze geschaffen , um das Internet zu zensieren , während Blogger zunehmend Risiken in Kauf nehmen , wenn sie ihre Meinung vertreten .
(trg)="2.2"> SOPA နဲ့PIPA ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဆန့် ကျင်တာကအစ တုပပစ္စည်း ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေး သဘောတူညီမှု ( ACTA ) ကို ရပ်တန့် ပစ်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အင်အားစုအထိ ၊
(src)="2.1"> Im letzten Jahr haben sich Organisationen zusammengeschlossen , wie niemals zuvor , um für Online-Freiheit zu kämpfen .
(trg)="2.3"> ကျွန်တော်ကျွန်မတို့တွေ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ပွင့် လင်းမြင်သာမှုကို အာရုံဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်။
(src)="3.1"> Mit diesem Gedanken kam eine Anzahl von Gruppen zusammen , um eine Erklärung der Internetfreiheit zu schaffen , zu deren Erstunterzeichnern Global Voices Advocacy gehörte .
(src)="3.3"> Nachfolgend findet ihr den Originaltext der Erklärung .
(trg)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ့Cheezburger .
(src)="3.4"> Du kannst die Erklärung hier unterzeichnen .
(trg)="3.7"> တောင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ပါ ⁠ ပါတယ်။
(src)="3.5"> Du kannst dich auch durch viele Organisationen daran beteiligen , zum Beispiel EFF , Free Press , Access , und sogar Cheezburger .
(trg)="6.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ လွတ်လပ်ခွင့် များကို ကာကွယ်ရန်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပါမည်၊
(trg)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို့၊
(src)="3.7"> Wir glauben , dass ein freies und offenes Internet eine bessere Welt herbeiführen kann .
(src)="3.9"> Wir glauben , dass diese mehr Kreativität , mehr Innovationen und offenere Gesellschaften herbeiführen werden .
(src)="4.1"> Wir beteiligen uns an einer internationalen Bewegung , um unsere Freiheit zu verteidigen , weil wir glauben , dass sie es wert sind , dafür zu kämpfen .
(src)="5.1"> Lasst uns diese Prinzipien diskutieren - stimmt mit ihnen überein oder lehnt sie ab , diskutiert sie , übersetzt sie , macht sie euch zu eigen , weitet die Debatten mit eurer Gemeinde aus - so wie das Internet es ermöglichen kann .
(src)="6.1"> Schließt euch uns an , das Internet frei und offen zu halten .
(trg)="13.2"> လျင်မြန်၍ တတ်နိုင်သော ကွန်ယက်များကို အလုံးစုံရယူအသုံးပြုနိုင်ရေး အသိမြှင့် တင်ကြရန ်
(trg)="14.4"> ရေးနိုင်၊
(src)="6.3"> Wir stehen für ein freies und offenes Internet .
(trg)="14.6"> စောင့် ကြည့် နိုင်၊
(src)="10.1"> Offenheit : Erhaltet das Internet als ein offenes Netzwerk , in dem jeder die Freiheit hat , sich zu vernetzen , zu kommunizieren , zu schreiben , zu lesen , zu konsumieren , zu reden , zuzuhören , zu lernen , schöpferisch und innovativ tätig zu sein .
(trg)="14.9"> သင်ယူနိုင်၊
(trg)="14.10"> ဖန်တီးနိုင်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်ရေး ပွင့် လင်းသော ကွန်ယက်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန ်
(trg)="15.1"> ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ၊
(src)="11.1"> Innovation : Schützt die Freiheit , Innovationen ohne Erlaubnis umzusetzen und schöpferisch tätig zu sein .
(trg)="15.2"> ခွင့် ပြုချက်မလိုအပ်ဘဲ ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်လွတ်လပ်ခွင့် ကို ကာကွယ်ကြရန်၊
(src)="1.1"> Mexiko : Sticken für den Frieden
(src)="2.1"> Faden , Nadeln und Stoff sind in Mexiko zu Kriegern für den Frieden geworden .
(trg)="2.4"> ဂွါဒလာဂျာရာနှင့် မက္ကစီကိုမြို့တော်တို့ကဲ့သို့မြို့များတွင်အသက်အရွယ်မရွေး အမျိုသား ၊
(src)="2.2"> In Städten wie Monterrey , Guadalajara und Mexiko City , haben Männer und Frauen aller Altersstufen entschieden , sich zu äußern und ihre Gedanken und Erfahrungen über Gewalt zu teilen , indem sie an einer gemeinsamen Hilfsaktion durch Sticken teilnehmen .
(trg)="2.5"> အမျိုးသမီးများသည်စုပေါင်းပန်းထိုးခြင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ပတ်သက်သော ၄င်းတို့၏ အတွေ့ကြုံနှင့် အမြင်များကို မျှဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
(src)="3.1"> In ihrem Blog Yo también quiero opinar , sagt Liliana Sánchez , dass sie das Projekt entdeckte , während sie durch das Viertel Coyoacán , ein Künstlerviertel in Mexiko City , spazierte :
(trg)="3.1"> လီ ⁠ လီယာနာ ဆန်းချက်က မက္ကစီကိုစီးတီးတွင်ဘိုဟီးမီးယန်း အနုပညာဆန်သော အနီးတဝိုက်လမ်းလျှောက်ရင်း ထိုလှုပ်ရှားမှုကို တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သူ့ဘလော့( ဂ်) ဖြစ်သော Yo también quiero opinar တွင်ဖော်ပြထားသည်။
(src)="1.2"> Das islamische Regime fing an , von iranischen Frauen das Tragen des Schleiers ( Hidschabs ) in der Öffentlichkeit zu erfordern , bald nachdem es 1979 die Macht im Lande ergriff .
(trg)="1.2"> ၁ ​ ၉ ​ ၇ ​ ၉ ​ က ​ စ ​ သော ဟီ ​ ဂျပ်​ ခေါင်း ​ ဆောင်း မ ​ ဆောင်း ​ မ ​ နေ ​ ရ ​ ဥပဒေ ​ ကို ဆန့် ကျင်​ ခြင်း
(src)="1.3"> Drei Jahrzehnte später veranstaltet die iranische Polizei jeden Sommer immer noch Schleierrazzien , um die Kleidungsweise der Bürgerinnen unter strenger Kontrolle zu halten .
(trg)="1.3"> ၁၉၇၉ခုနှစ်တွင်အာဏာရယူပြီးမကြာမီတွင်ပင်အစ္စလာမ်မစ်အစိုးရက အီရန်အမျိုးသမီးများကို ခေါင်းဆောင်း ( ဟီဂျပ်) မဝတ်မနေရဝတ်စေရန်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
(src)="2.1"> Am 10. Juli 2012 starteten die “ Iranischen Liberalen Studenten und Absolventen“ eine Kampagne auf Facebook .
(trg)="1.4"> ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာပြီးနောက်တွင်အီရန်ရဲများက နွေရာသီတိုင်းတွင်လူများဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို ဆက်လက်တင်းကျပ်ရန်အတွက်ခေါင်းဆောင်းနှိမ်နင်းမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
(src)="2.2"> Ihr Ziel ist es , zum verbindlichen Tragen des Hidschabs „ Nein“ zu sagen .
(src)="3.1"> Die Seite " Unveil women's right to unveil " ( " Enthüllt das Recht der Frauen auf Enthüllung " ) hat bereits über 26.000 „ Gefällt mir“-Vermerke erhalten.
(trg)="2.2"> ဇူလိုင်လ ( ၁၀ ) ရက်နေ့တွင်မဝတ်မနေရဟီဂျပ်ဥပဒေကို ဆန့် ကျင်ရန်အတွက်" အီရန်လူမျိုး လစ်ဘရယ်ကျောင်းသားများနှင့် ဘွဲ့ရများ " က ဖေ့( စ်) ဘွတ်( ခ်) လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို စတင်ခဲ့သည်။
(src)="3.2"> Hunderte Männer und Frauen teilten ihre eigenen Fotos , Erfahrungen und Kommentare und fügten ihnen das Logo der Seite hinzu .
(trg)="3.1"> " လှစ်ဟနိုင်ဖို့အမျိုးသမီးများအခွင့် အရေးကို လှစ်ဟခြင်း " စာမျက်နှာသည်လက်ရှိအချိန်ထိ ကြိုက်သူပေါင်း ( ၂၆၀၀၀ ) ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
(src)="3.3"> Einigen gefällt es , den Schleier zu tragen , anderen nicht .
(trg)="3.2"> အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားရာကျော်တို့က ၄င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများ ၊
(src)="3.4"> Jedoch einigen sich alle darauf , dass es ihr Recht sein soll , selbst bestimmen zu können , ob man ihn trägt oder nicht .
(trg)="3.3"> အတွေ့အကြုံများနှင့် မှတ်ျချက်များကို ဝေမျှခြင်းဖြင့် စာမျက်နှာ ၏ အမှတ်အသားကို ထပ်မံဖြည့် စွက်ပေးခဲ့သည်။
(trg)="3.4"> အချို့က ခေါင်းဆောင်းဆောင်းရခြင်းကို နှစ်ခြိုက်ပြီး အချို့က မနှစ်သက်ကြပေ ။
(src)="5.1"> Auf der Facebookseite ist zu lesen :
(trg)="3.5"> သို့ရာတွင်အားလုံးက ခေါင်းဆောင်းဝတ်၊
(src)="6.1"> Die Durchsetzung des Schleiertragens durch den Staat hat die Frauen ihrer fundamentalen Rechte beraubt .
(trg)="3.6"> မဝတ်ရွေးချယ်ခြင်းသည်၄င်းတို့၏ အခွင့် အရေးသာ ဖြစ်သင့် သည်ဟု သဘောတူကြသည်။
(src)="6.2"> Indem die Regierung Sonderpolizeieinheiten an jede Ecke , auf jede Straße und jeden Weg stellte , scheute sie keine Kosten , um die Frauen zu zwingen , sich den engstirnigen Normen und Standards des Regimes anzupassen und sie sich belästigt und entpersonifiziert fühlen zu lassen .
(trg)="6.3"> လမ်းတိုင်းနှင့် လမ်းကြားတိုင်းတွင်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထားရှိခြင်းဖြင့် အစိုးရသည်အုပ်ချုပ်သူ ၏ သဘောထားကျဉ်းမြောင်းသော သတ်မှတ်မှုများနှင့် စံနှုန်းများကို အမျိုးသမီးများအား လက်ခံကျင့် သုံးစေရာတွင်အာဏာကုန်သုံးခဲ့သည်၊
(src)="6.4"> Jedoch zogen diejenigen , die sie durchsetzen , keine Lehre daraus .
(trg)="6.4"> အမျိုးသမီးများအား ရှက်ကြောက်မှုကို ခံစားရစေပြီး အရာဝတ္ထုများသဖွယ်ဆက်ဆံခဲ့သည်။
(src)="7.1">“ Iranische Liberale Studenten und Absolventen“ startet in Solidarität mit iranischen Frauen die „ Nein zum verbindlichen Hidschabtragen“ Kampagne , um die Kleidungsfreiheit zu betonen .
(trg)="6.5"> အီရန်အမျိုးသမီးများက ထိုလူသားမဆန်သော ဥပဒေနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို အစဉ်ဆန့် ကျင်ပြီး မလိုက်နာခဲ့သော်လည်း ဖိအားပေးလိုက်နာခိုင်းသူများကမူ မည်သည့် အခါကမျှ သင်ခန်းစာကို မသင်ယူခဲ့ပေ ။
(src)="7.2"> Alle Gruppen oder Personen , die bei dieser Kampagne mitwirken und helfen wollen , sind herzlich willkommen .
(trg)="6.6"> နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နွေရာသီတွင်အမျိုးသမီးများအပေါ်၌ ပိုမိုပြင်းထန်သော နှိမ်နင်းမှုများကို ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရသည်။
(src)="7.3"> Nane Sarma erzählt über ihre jüngste Erfahrung im Laleh Park in Teheran , der Hauptstadt des Iran :
(trg)="7.2"> ကျွန်တော်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်လိုသူ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနှင့် လူတိုင်းကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
(src)="7.4"> Ich war dort mit Freunden , wir lachten , und dann gab es einen Windstoß und mein Kopftuch fiel zu Boden .
(trg)="7.3"> နာနီ စာမာက အီရန်နိုင်ငံ ၏ မြို့တော်တီဟီရန်ရှိ လာလယ်ပန်းခြံမှ လတ်တလောအတွေ့အကြုံကို မျှဝေထားသည်မှာ
(src)="7.5"> Die Beamten des Polizeivollzugsdienstes kamen auf mich zu .
(trg)="7.4"> ကျွန်မက အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရယ်မောနေကြတာ ၊
(src)="7.8"> Von denselben , die uns aus dem Park jagten , weil wir Fußball zusammen mit Jungs gespielt hatten .
(trg)="7.12"> ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတွေကို ကျွန်မတွေ့လိုက်တာ ၊
(src)="7.9"> Sie denken offensichtlich , dass wir uns einfach in leere Häuser begeben , dort rauchen und Sex treiben sollen , um unserer Energie Spielraum zu gewähren .
(trg)="7.16"> ပန်းခြံထဲမှာ ကောင်လေးတွေနဲ့ကောင်မလေးတွေ အတူတူ ဘောလုံးကစားကြလို့ကျွန်မတို့ကို ကန်ထုတ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးတွေကပဲပေါ့။
(src)="7.10"> Kamal , ein junger Iraner , schreibt :
(trg)="7.20"> အီရန်လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကာမယ်( လ်) က ရေးထားသည်မှာ
(src)="7.11"> Ich bin Muslim , und ich sage , dass laut der religiösen Lehre niemand die Frauen dazu zwingen kann , einen Schleier zu tragen .
(trg)="7.21"> ကျွန်တော်က မူဆလင်တစ်ယောက်၊
(trg)="7.22"> အဲဒီတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်၊
(trg)="7.23"> ဘာသာရေးသင်ကြားမှုတွေအရ အမျိုးသမီးတွေကို ခေါင်းဆောင်းဆောင်းခိုင်းဖို့ဘယ်သူကမှ ဖိအားပေးလို့မရဘူး
(src)="7.13"> Die Überschrift lautet : „ Auch wenn ich einen Schleier trage , habe ich kein Recht dazu , es von anderen zu verlangen“ .
(trg)="7.24"> နာဖီဆက်က ခေါင်းဆောင်းဆောင်းထားသော ၄င်း ၏ ဓာတ်ပုံကိုတင်၍ " ကျွန်မက ခေါင်းဆောင်းဆောင်းတယ်ဆိုရင်တောင်တခြားလူတွေကို ( ဆောင်းဖို့) ဖိအားပေးဖို့အခွင့် အရေး ကျွန်မမှာ မရှိပါဘူး " ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
(src)="8.1"> Afsaneh sagt :
(trg)="8.1"> အာဖစနယ်က ပြောသည်မှာ ၊
(src)="8.2"> Ich wünsche mir , dass der Iran ein Staat ist , wo das Tragen eines Hidschabs nicht verbindlich ist .
(trg)="8.2"> ကျွန်တော်က အီရန်ကို ဟီဂျပ်မဝတ်မနေရ မသတ်မှတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
(src)="8.3"> Diejenigen für oder gegen ihn sollten ihre Kleidungsweise frei bestimmen können .
(trg)="8.3"> ဟီဂျပ်ဝတ်တာကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေရော ဆန့် ကျင်တဲ့သူတွေပါ သူတို့တွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို ကြိုက်သလို ရွေးခွင့် ရှိသင့် ပါတယ်။
(src)="8.4"> Jeder muss der anderen Lebensform Respekt zollen und sie akzeptieren .
(trg)="8.4"> လူတိုင်းက တခြားရှင်သန်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို လက်ခံလေးစားရပါမယ်။
(src)="8.5"> Es ist nicht das Problem der Frauen , dass ( vielleicht nur einige ) Herren beim Anblick einer unverschleierten Frau erigieren .
(trg)="8.5"> ( ဖြစ်နိုင်တာက တချို့) ယောက်ျားတွေက ခေါင်းဆောင်းလှစ်ဟထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို မြင်တဲ့အခါ လိင်စိတ်ကြွလာတယ်ဆိုတာက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး ။
(src)="8.7"> Amir Lohrasbi erinnert sich an die jungen Tage der Islamischen Revolution , als die iranische Zeitung Ettelat Ayatollah Mahmoud Taleghani zitierte , den führenden Revolutionär , der das verbindliche Tragen des Hidschabs ablehnte .
(trg)="8.9"> အီရန်သတင်းစာ အီတယ်လတ်က ဟီဂျပ်မဝတ်မနေရသတ်မှတ်ခြင်းကို ဆန့် ကျင်သော တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် အယာတိုလာ မာမွတ်တာလယ်ဂါနီပြောသည်များကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(src)="8.8"> Taleghani war auch ein revolutionärer Staatsanwalt und behauptete , dass diejenigen , die Frauen ohne einen Schleier belästigen , Revolutionsgegner seien .
(trg)="8.10"> သူက ခေါင်းဆောင်းမပါသော အမျိုးသမီးများကို ဒုက္ခပေးသူများသည်တော်လှန်ရေး ၏ ဆန့် ကျင်သူများဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
(src)="9.1"> Der Kampf gegen das verbindliche Schleiertragen begann vor 33 Jahren , als mutige iranische Frauen im März 1979 dem Regime zum Trotz in Teheran protestierten und von Regimeanhängern niedergestochen wurden .
(trg)="10.2"> မတ်လတွင်တီဟီရန်ရှိ ဆန့် ကျင်မှုတွင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်ထောက်ခံသူများမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကို ခံခဲ့ရရာမှ ခေါင်းဆောင်းမဆောင်းမနေရဆောင်းခြင်းကို ဆန့် ကျင်ရုန်းကန်မှုသည်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(src)="9.2"> Die Gewalt siegte , das verbindliche Tragen wurde durchgesetzt .
(trg)="10.3"> အကြမ်းဖက်မှုက အောင်မြင်ပြီး ခေါင်းဆောင်းမဆောင်းမနေရဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့သည်။
(src)="1.1"> Tadschikistan : 'Halloween ist nicht für Patrioten '
(trg)="1.1"> တာ ​ ဂျစ်​ ကစ္စ ​ တန်၊
(src)="1.2"> Es gibt nur wenige Leute in Tadschikistan , die über Halloween Bescheid wissen , geschweige denn es begehen .
(trg)="1.4"> သို့သော်လည်း နိုင်ငံတွင်းတွင်အားလပ်ရက်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ဆင်ယင်ကျင်းပမှုများက လူအချို့ကို မသက်မသာ ခံစားရစေသည်။
(src)="2.1"> 'Fremdartiger ' Feiertag
(trg)="2.1"> ' သူစိမ်းပြင်ပြင်' အားလပ်ရက ်
(src)="3.1"> Am 31. Oktober gab der Blogger Bachai Sako den Ton für eine Diskussion auf blogiston.tj an .
(trg)="3.1"> အောက်တိုဘာလ ( ၃၁ ) ရက်နေ့တွင်ဘလော့( ဂ်) ရေးသူတစ်ဦးဖြစ်သော ဘာချိုင်စာကိုသည်blogiston .
(src)="3.2"> Verstört durch den Wunsch seines Sohnes , Halloween mit seinen Freunden zu feiern , schrieb er , dass die Wurzeln dieses Feiertages im Heidentum und der westlichen Kultur lägen .
(trg)="3.3"> သူငယ်ချင်းများနှင့် ဟယ်လိုဝင်းပွဲကို ကျင်းပရန်စိတ်အားထက်သန်နေသာ သူ ၏ သားကြောင်း စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရသော ဘာချိုင်က ထိုအားလပ်ရက်သည်ဗာဟီရဝါဒကို မြစ်ဖျားခံလာပြီး အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည်။
(src)="3.3"> Bachai Sako schlug deshalb vor :
(trg)="3.4"> ပြီးနောက်ဘာချိုင်စာကိုက ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သည်မှာ ၊
(src)="3.4"> Ich denke , wir sollten die Geschichte und die Herkunft dieser Tradition niemals vergessen .
(trg)="3.5"> ကျွန်တော်ကတော့ဒီအစဉ်အလာရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့မြစ်ဖျားခံရာကို ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်တော့မှ မမေ့သင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ ။
(src)="3.5"> Halloween ist ein wichtiger Feiertag für Heiden und Christen und hat somit nichts mit den Werten und Traditionen der tadschikischen Nation und der islamischen Gesellschaft zu tun .
(trg)="3.8"> ကျွန်တော်တို့တွေက မျိုးဆက်သစ်တွေကို ဟယ်လိုဝင်းဆိုတာ တာဂျစ်( ခ်) လူမျိုးတွေနဲ့မူဆလင်တွေအတွက်သူစိမ်းပြင်⁠ ပြင်ပါ ။
(src)="3.6"> Wir sollten der jüngeren Generation beibringen , dass Halloween fremd für Tadschiken und alle Muslime ist .
(trg)="3.9"> နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့တာဂျစ်( ခ်) ယောင်္ ကျားလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေက ဒီသူစိမ်းပြင်ပြင်အားလပ်ရက်ကို ဘယ်တော့မှာ မကျင်းပသင့် ဘူး ။
(src)="3.7"> Stolze tadschikische Jungen und Mädchen , die ihre Nation lieben , sollten nie irgendwelche fremden Feiertage begehen .
(trg)="3.10"> ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်သူ မာ့( ခ်) ဘလူအာက တာဂျစ်ကစ္စတန်တောင်ပိုင်း ၊
(src)="3.8"> Christian Mark Bleur machte dieses Foto während einer Halloween-Party in Qurghonteppa , Südtadschikistan .
(trg)="3.11"> ခါဂန်တယ်ပါရှိ ဟယ်လိုဝင်းပါတီတစ်ခုတွင်ရိုက်ကူးခဲ့သော ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။
(src)="3.9"> Benutzung mit Genehmigung .
(trg)="3.12"> ခွင့် ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။
(src)="4.1"> Teocrat , ein anderer Blogger stimmte Bachai Sako zu , als er auf dessen Beitrag antwortete :
(trg)="4.1"> ဘာချိုင်စာကို ၏ စာတွင်မှတ်ချက်ပေးလျက်အခြားတာဂျစ်( ခ်) ဘလော့( ဂ်) ရေးသူတစ်ဦးဖြစ်သူ တီယိုကရတ်က သဘောတူခဲ့သည်မှာ
(src)="4.2"> Ich kann Ihnen nur zustimmen !
(trg)="4.2"> ငါတော့မင်းနဲ့သဘောတူတာပဲ ။
(src)="4.3"> Ich bin mir sicher , dass unsere jungen Leute wegen solcher " Feiertage " in ihrem Glauben geschwächt werden .
(trg)="4.3"> ဒီလိုမျိုး " အားလပ်ရက်" တွေကြောင့် ငါတို့ရဲ့လူငယ်တွေက သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်မှာ အားနည်းလာကြတယ်လို့ငါသေချာပေါက်ပြောရဲတယ်။
(src)="4.4"> Haben wir nicht unsere eigenen nationalen und muslimischen Feiertage ?
(trg)="4.4"> ငါတို့တွေမှာ ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသား မူဆလင်အားလပ်ရက်တွေ မရှိလို့လား ။
(src)="4.6"> 'Harmloser Schabernack '
(trg)="4.6"> ' အပြစ်မဲ့ပျော်စရာဟာသ '
(src)="5.1"> Jedoch dachten einige Blogger , dass Bachai Sako zu weit geht , wenn er den Feiertag kritisiert .
(trg)="5.1"> သို့ရာတွင်လည်း အချို့ဘလော့( ဂ်) ရေးသူများကမူ ထိုအားလပ်ရက်ကို ဘာချိုင်စာကိုဝေဖန်ပုံမှာ တရားလွန်တရားမင်း ဖြစ်ခဲ့သူဟု ထင်မြင်ကြသည်။
(src)="5.2"> Mustafo schrieb :
(trg)="5.2"> မူစတာဖိုက ရေးခဲ့သည်မှာ
(src)="5.3"> Gehen Sie nicht zu weit.
(trg)="5.3"> သိပ်တရားမလွန်ကြပါနဲ့။